ဆီပွတ်သောကြေးဝါရေချိုးခန်း Faucet ၄ လက်မ
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW ရေချိုးခန်း Faucet ၄ လက်မစင်တီမီတာနစ်မြုပ်နေပြီ
WOWOW ရေချိုးခန်းမှရေပိုက် ၄ လက်မစင်တီမီတာရေမှုတ်ထားသောကြေး
WOWOW faucet ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖိအားကိုစမ်းသပ်သည် - အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုအာမခံရန်တိကျခိုင်မာစွာရေဖိအားအောက်တွင်အစမ်းရိုက်ခြင်းများ။ ၄ လက်မကျယ်ပြန့်သောရေချိုးခန်း faucets၊ အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါတည်ဆောက်မှုသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောခေတ်မီ Layout အတွက်ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သောလှပသောထိပ်တန်းအဆုံးဖြစ်သည်။
232120RB installation ကိုညွှန်ကြားချက်
အနက်ရောင် Centre ရေချိုးခန်းရေချိုးခန်း faucets 2321200RB အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - အကယ်၍ သင်သည်ငါတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုစဉ်းစားပါကကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ဗဟိုဌာန; Faucet ဒီဇိုင်းနှင့်ဓာတ်လှေကားလှိမ့်၊ လက်နှစ်ချောင်းပါသော Faucet ရေချိုးခန်း - ရေအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူရေကိုပြင်ပေးရန်နှစ်လက်ကိုင် faucet သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ရေနုတ်မြောင်းတွင်ပါ ၀ င်သောသန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး - ရေချိုးခန်း faucet Oil Rubbed Bronze သည်သတ္တုယိုစီးမှုတပ်ဆင်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ရေရှိသည့်အပေါက်မှထွက်လာသည့်ဓာတ်လှေကား၏လှံတံကို နှိပ်၍ သင်၏လက်များကိုမွှေနှောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ နစ်မြုပ် FAUCET OIL ပွတ်တိုက်: နှစ်ခုလက်ကိုင် faucet ဒီဇိုင်းကိုဂန္ retro ။ ချေးတိုက်ဖျက်။ ကွန်ဒိုအသစ်၊ တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊ မော်တာအိမ်များ၊ ခရီးသွားနောက်တွဲယာဉ်များနှင့်အိမ်သုံးအတွက်သင့်လျော်သောကုန်းပတ်သည် vanity faucet ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
SKU: 2321200RB Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: ရေချိုးခန်းစုပ် faucet, စင်တာအိမ်သာ, စင်တီမီတာစင်တီမီတာရေချိုးခန်း, ရေနံကြေးပွတ်
T က *** y က2020-06-28
ဒါဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပုံပါပဲ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးမှု၊ မျက်နှာအသွင်အပြင်မရှိသည့်အပြင်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ စျေးနှုန်းကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်
B က *** ဋ2020-07-28
ကျွန်မခင်ပွန်းကအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီဝယ်ယူမှုကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ် အဲဒါကအများကြီးပိုစျေးကြီးတယ်၊ ငါချီးမွမ်းတာအများကြီးရတယ်။ ထိပ်တန်းထစ်ဖောက်သည် s ကို
N ကို *** ဇ2020-06-06
ဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မှု။ သင် faucet ကိုပိတ်ထားသည့်အခါသံလိုက်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီးရေဖျန်းခြင်းကိုအတွင်း၌ထားနိုင်သည်။ ငါ faucet နှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမတိုင်ကြားချက်ရှိသည်။
T က *** r2020-06-15
နောက်ပြန်မလှည့်သောကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ်မီးဖိုချောင်ရေဆေးကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ငါယခုတစ်ပါတ်လောက်သာ faucet ကိုသုံးပါကယခုအထိကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
တစ်ဦးက *** ဃ2020-06-18
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူအရည်အသွေးကောင်းရေချိုးခန်း faucet ။ ငါကအပြည့်အဝကိုက်ညီငါ့အရေတိုင်ကီရေပြောင်းလဲမှုအတွက်ဝယ်ယူ! ငါတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်
အီး *** r2020-06-26
L ကို *** ဂရမ်2020-07-06
စျေးနှုန်းအဘို့ဤ faucet ရိုက်နှက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါ၏အဝယ်ယူနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်။
ခန့်မှန်းပေးပို့ရက်ထက်မြန်သည်။ အလွန်ကြင်နာစွာ Boxed ။ ထည့်သွင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, အလွန် classy ကြည့်ရှုသည်။ ငါ 4X ကုန်ကျမယ့် Delta faucet ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်၊ ဒီအသစ်ကပိုကောင်းသလိုကြည့်ရတာလွယ်ကူတယ်။ အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။
: P *** ဇ2020-07-15
လေးလံသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်ပေးသည့်အထုပ်တစ်ခုရောက်လာသည်။ အဆိုပါလက်ကိုင်နှင့်ယိုစီးမှု၏သော့ခတ်၏ Nice လှုပ်ရှားမှု။ ထပ်မံဝယ်ယူပြီးတစ်လလောက်တပ်ဆင်ထားပြီ။
: P *** y က2020-07-19
ကုန်ပစ္စည်းကောင်း စူပါလွယ်ကူစွာ install လုပ်ပါ။ ငါသည်ငါ့ RV အတွက် faucet ကိုအစားထိုးဖို့ကအသုံးပြုသောကြောင့်အလွန်ကောင်းပါတယ်, ငါငါ့အိမျ၌ရေချိုးခန်း faucets အစားထိုးဖို့ပိုဝယ်ယူနေပါတယ်။
: P *** s ကို2020-07-22
အရည်အသွေးကောင်းသည်ရေစီးရေကောင်းမွန်စေသည်၊ လေကိုထုတ်လွှင့်ရန်လွယ်ကူသည်၊ လှပသောဒီဇိုင်းရှိသည်။ တစ်ဖုသည်အခြားတစ်ခုထက်ပိုမိုအားနည်းကြောင်းသတိပြုမိသည်။ လွယ်ကူသောပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားစိတ်ပျက်စရာမရှိပါက WOWOW အတွက်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်း။ ကြီးမြတ်ဝယ်!
, G *** ဎ2020-07-25
အရည်အသွေး၊ ကြည့်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ထပ်စုပ်ယူရန်ဒုတိယအကြိမ်ဝယ်လိုက်သည်။
ရေဖွင့် / ပိတ်သည်တိကျသည်။ ကြည့်ရတာသန့်ရှင်းသပ်ရပ်တယ်။ အဆိုပါတွန်းအားပေးယိုစီးမှု LOVE! အများကြီးအစားထိုးနှင့်အစားထိုးကြောင်းလီဗာ - ဆွဲယိုစီးမှုဟောင်းထက်ပိုမိုထိရောက်သော!
တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်သားငယ်ကို (ကျွန်ုပ်၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်) တပ်ဆင်ပါ။ ဒီဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်။
F ကို *** ဎ2020-07-29
စျေးနှုန်းကအရမ်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး strainer design ကိုလည်းကြိုက်တယ်။ ကြံကောင်းစွာကာကွယ်ထားareasရိယာအားလုံးနှင့်အတူထုပ်ပိုး။ ရောင်းသူကထုပ်ပိုးမှုကိုမပြောင်းလဲပါနဲ့ အလုပ်ကောင်း သေချာမသိပေမယ့်ဒီငါနောက်ဆုံးသော faucets ထက်ပိုမိုတိတ်ဆိတ်ပုံရသည်။
S က *** s ကို2020-08-19
လုံးဝလှပသော! အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ် ငါအရင်ရှိခဲ့ထက်ပို။ ရှည်နှင့်ပိုမိုထွက်ရောက်ရှိ။ ငါ့လျှောက်လွှာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ အရည်အသွေးပြီးအောင်! ပလတ်စတစ်မဟုတ်ပါဘူး။ လေးလံသောတာဝန်! ငါ၏အဝယ်ယူနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်!
J ကို *** င2020-09-01
ဒီ faucet အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ နောက်တစ်ခုဝယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။
H ကို *** y က2020-09-15